Wp/blk/အေင်ဒိယခမ်းထီ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > အေင်ဒိယခမ်းထီ
အေင်ဒိယခမ်းထီ (ဟဉ်ဒီ: Bhārat Gaṇarājya) (ဗဉ်ဂလီ: ভারতীয় প্রজাতন্ত্র Bhārat projatontro) (အဲင်းကလေတ်: India) ယို တရာꩻဝင်ႏအနေႏ အဝ်ႏဟဲ့ꩻဖန်ခါꩻ အေင်ဒိယ ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီတဲင် အဝ်ႏဒျာႏ အာသျတွိုက်အခဝ်နဝ်ကို ကမ္ဘာႏလောင်း ထွာဒျာႏ ဟံႏနယ်ႏအအဲဉ်ႏအလုဲင်း အတန်သွတ်ꩻခမ်းထီဖုံႏအကို အဝ်ႏသတ္တမအရန်း၊ ထွာဒျာႏ ဒုတိယလိုꩻဖြာꩻအအာသွတ်ꩻခမ်းထီ တောမ်ႏ ဒီမိုကရေသီခမ်းထီဖုံႏအကို ထွာဒျာႏ လိုꩻဖြာꩻအအာသွတ်ꩻ ခမ်းထီဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ဖဲ့ꩻနဝ်နဝ်ꩻ အေင်ဒိယသမုဒ္ဒရာႏ၊ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ်ꩻ အာရတ်ပင်ႏလယ်ႏ၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ဗဉ်းကလားပင်ႏလယ်ႏအော်ႏဖုံႏ အဝ်ႏရမ်ꩻခါꩻတဲင် အေင်ဒိယခမ်းနဝ်ꩻ ကမ်းရိုးတန်းအဒွေါင်ႏအဆွာꩻ အဝ်ႏစွဉ်ႏမဲင်ႏပေါင်ꩻ ၄၆၇၁ မဲင်ႏ (၇၅၁၇ ကီလိုမီတာ)နဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏရောင်ꩻဒါႏခမ်းထီဖုံႏအနေႏ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ Wp/blk/ဗဉ်းကလားဒေတ်ခမ်းထီ၊ Wp/blk/မျန်မာခမ်းထီ၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏထင်ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ Wp/blk/နီပေါခမ်းထီ၊ Wp/blk/ခယ်ႏခမ်းထီ၊ ဗူတန်ခမ်းထီ၊ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ Wp/blk/ပါကစ်သတန်ခမ်းထီဖုံ အဝ်ႏခူခါꩻနဝ်ꩻသွူ။ အေင်ဒိယသမုဒ္ဒရာႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ ခမ်းထီဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ Wp/blk/သီရိလင်ႏကာႏခမ်းထီ၊ Wp/blk/မော်ဒုဲက်ခမ်းထီ တောမ်ႏ Wp/blk/အဉ်ဒိုနီးသျားခမ်းထီလဲ့ အဝ်ႏဗော့ꩻနေနေသွူ။ အေင်ဒိယခမ်းထီ ဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏ အအဲဉ်ႏအလုဲင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏစတုရန်းမဲင်ႏ ၁,၂၆၉,၃၄၆ မဲင်ႏ နဝ်ꩻသွူ။ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၁ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအလꩻ အေင်ဒိယခမ်းကိုနဝ်ꩻ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအဝ်ႏ ၁,၂၁၀,၁၉၃,၄၂၂ ဖြာꩻ (သန်း ၁၂၀၀ လွို) နဝ်ꩻသွူ။
भारत गणराज्य, Bhārat Gaṇarājya
(ထွား အေင်ဒိယခမ်းမိဉ်ꩻ တောမ်ႏဒေႏသခံႏဘာႏသာႏလင်ကို)
ဆောင်ႏအွံ: "en:Satyameva Jayate" (Sanskrit)
ခမ်းထီငဝ်းသꩻချင်ꩻ: "en:Jana Gana Mana"
"en:Vande Mataram" (Sanskrit)
"I Bow to Thee, Mother"[မတ်ရောမ် 1]
Wp/blk/မွန်ဗုဲင်း (city proper)
Wp/blk/ဒေလီ (metropolitan area)
အွဉ်ႏရေꩻ ခမ်းထီတန် ဘာႏသာႏငဝ်းငွါဖုံႏ
၄၄၇ ဘာႏသာႏ[မတ်ရောမ် 3]
ဖြယ်ဒရယ် ပါလီမန် အခေႏခံႏဥပဒေႏ ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ
en:Ram Nath Kovind
en:N. V. Ramana
၁၉၄၇ ဩဂုတ် ၁၅
၁၉၅၀ ဇန်နဝါရီ ၂၆
၃,၂၈၇,၂၆၃ km2 (၁,၂၆၉,၂၁၉ sq mi)[မတ်ရောမ် 4] (အရန်း: 7th)
• ထီနမ်း (%)
• ၂၀၁၉ Template:Wp/blk/UN Population အရမ်ꩻ
1,352,642,280 Template:Wp/blk/UN PopulationTemplate:Wp/blk/UN Population (အရန်း - 2nd)
• 2011 သန်ခေါင်စာႏရင်ꩻ
1,210,854,977 (အရန်း - 2nd)
၃,၂၈၇,၂၆၃/km2 (၈,၅၁၃,၉၇၂.၁/sq mi) (အရန်း - 19th)
$11.745 ထရီလီယံ (အရန်း - 3rd)
$8,358 (အရန်း - 128th)
$3.29 ထရီလီယံ (အရန်း - 6th)
$2,342 (အရန်း - 144th)
ထာႏဝ · 98th
ထာႏဝ · 131
အေင်ဒိယ ရူပီး (₹) (INR)
နီꩻ/လာ/နေင်ႏ [မတ်ရောမ် 5]
ISO 3166 ကိုဒ်
အေင်ဒုကောင်ရွေꩻခါႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻ ဖွာꩻထန်ႏလွဉ်ခင်ႏလမ်း၊ သမဲင်ꩻဝင်ႏ ကွန်ႏသယ်ႏတဖူꩻရဲဉ်ႏတောမ်ႏ တန်ထိုဒါႏအဉ်ပါယာခမ်းထီဖုံႏ အဝ်ႏဒါႏအရပ်ဒေႏသဒျာႏတဲင် အေင်ဒိယနဝ်ꩻ မိဉ်ꩻတန်တင်ႏသျာꩻထွူ သမဲင်ꩻခြောင်ꩻ တဖူꩻဆွာꩻအကို ဝွေꩻစီꩻပွာꩻရေꩻ ယေန်ႏငဲးရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ လွိုင်ႏကွုန်ꩻဗွေစွုမ်ႏဒါႏ ဒေႏသအနေႏ အဝ်ႏအွဉ်ႏထွော့လွ့နဝ်ꩻသွူ။ ကမ္ဘာႏဘာႏသာႏတန် ၄ ဘာႏသာႏ ကထွာဒါႏ Wp/blk/ဟေင်ဒူဘာႏသာႏ၊ Wp/blk/ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ၊ Wp/blk/စေင်းဘာႏသာႏ တောမ်ႏ Wp/blk/သိစ်ဘာႏသာႏဖုံႏလဲ့ ဖွာꩻထန်ႏလွဉ်ဒျာႏ အေင်ဒိယခမ်းထီကိုတဲင် အဝ်ႏကုဲင် Zoroastrianism၊ Wp/blk/စျူးဘာႏသာႏ၊ Wp/blk/ခရိယာန်ႏဘာႏသာႏ၊ အစ်သာလာမ် ဖုံႏလဲ့ ဖျော်တွိုႏလွဉ် အေင်ဒိယခမ်းကိုနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ပထမရေင်ဗူႏနေင်ႏအကိုကာႏတဲင် အေင်ဒိယခမ်းထီကိုနဝ်ꩻ ယိုꩻယာႏယေန်ႏငဲးရေꩻ အဝ်ႏစွုမ်ႏဒါႏ ခမ်းတခမ်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏစ ၁၈ ရျာꩻဗူႏအစဝ်းခိန်ႏကို ဗိတိသျအေင်ဒိယအခဝ်ကွဉ်ႏ ကိုမ်ႏပဏီႏ နွို့လွဉ်တလဲင်ႏတစိꩻစိꩻတဲင် တွိုႏ ၁၉ ရျာꩻဗူႏနဝ်ꩻ ထဲ့အဝ်ႏသော့ꩻထိုꩻဗာႏ ဗိတိသျအဲင်းကလေက် ကလာꩻဗွာသီးစူကိုနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏ ခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၄၇ ဗာႏ နေးတောမ်ႏအချော်ꩻနယ်ꩻ လွိုဆန်လွေꩻဗိတိသျသီးတဲင် ၁၉၄၇ ဗာႏနဝ်ꩻ လꩻလွေꩻခန်း လွစ်တခြင်ရေꩻ ဗိတိသျအဲင်းကလေက်သီး စူကိုနဝ်ꩻသွူ။
အေင်ဒိယနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ပါလီမန် ဖြယ်ဒရယ်ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီတဲင် ဖွဲ့ဗူႏခါꩻတောမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏ ၂၈ ဖြုံႏ တောမ်ႏ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ ၇ ဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ကမ္ဘာႏလောင်း မိဉ်ႏထွားလုဲင်ႏရွဉ်ဆေꩻကွက်ꩻနုံꩻနဝ်ꩻ စီꩻပွာꩻရေꩻအလꩻ ထွာစွဉ်ႏ အတန်သွတ်ꩻ အရန်း ၁၂ ကိုတဲင် ထွာစွဉ်ႏ စတုတ္ထဖြေꩻထူႏအာႏ အဟဝ်သွတ်ꩻ ခမ်းထီတဖြုံႏဒျာႏသွူ။ ပွိုးတောမ်ႏ စီꩻပွာꩻရေꩻအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ ထင်ႏထိုမုꩻတဲင် အေင်ဒိယနဝ်ꩻ စီꩻပွာꩻရေꩻထင်ႏထိုမုꩻအာႏကို တွိုႏလွဉ်စွဉ်ႏ ဒုတိယအရန်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ အေင်ဒိယခမ်းထီကိုနဝ်ꩻ ကေန်ꩻခြေားမုꩻဖုံႏ၊ ဒါႏတဝ်းလိတ်သားဖုံႏ၊ အဟာႏရလိုမ်းဗွေတဝ်းဖုံႏ အဝ်ႏအာနေကနဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻ၊ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါ၊ လိုꩻမျိုꩻခွိုꩻနွယ်ႏ အဝ်ႏအာအဝ်ႏလွိုင်ႏအဝ်ႏစွုမ်ႏဒါႏ အေင်ဒိယခမ်းထီနဝ်ꩻ သဘာဝထိန်ꩻသိမ်ꩻရေꩻကိုလဲ့ တရိစ္ဆာန်ႏထာꩻသားတခြာသီးအတာႏ ထွာအီလမ်းပါႏနေနေသွူ။
အေင်ဒိယခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ စွိုးခွိုꩻအမုဲင်ဖုံႏ (တရာꩻဝင်ႏ)
စွိုးခွိုꩻအမုဲင် heritage animal
အေင်ဒိယ(India) ကရိုꩻဒါႏ အမိဉ်ꩻငဝ်းငွါယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒျာႏ "အိန္ဒု (Indus)" ငဝ်းငွါအမိဉ်ꩻကို ဖွာꩻလင်ꩻလွဉ်တဲင် အခေႏခံႏဒျာႏ ပါသျားငဝ်းငွါစခါ "Hindu" တောမ်ႏ သင်္ကရိုက်(Sanskrit)ဘာႏသာႏ "Sindhu" အရွီးခိုႏတောမ်ႏ ဒေႏသခံႏသီးကဟဲ့ꩻဒါႏ အေင်ဒုခြောင် သမဲင်ꩻဝင်ႏမိဉ်ꩻဒျာႏသွူ။ အေင်ဒိယယို ဂရိပွိုင်းလဲင်ႏစခါနဝ်ꩻ အဝ်ႏဟဲ့ꩻဖန်ဒျာႏ "အင်ဒွိုင် (Indoi) (Ινδοί)" နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် အဓိပ္ပာယ်ႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ "လိုꩻအေင်ဒု" နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ အေင်ဒိယခမ်းထီ ဖြွမ်းဗူႏပုင်ႏအခေႏခံႏဥပဒေႏတောမ်ႏ အေင်ဒိယခမ်း ဘာႏသာႏငဝ်းငွါပေါင်ꩻစွုမ်ႏကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻအသိမတ်ဒျာႏ "ဘာရတ်(Bharat)"အမိဉ်ꩻ တရာꩻဝင်ႏအမိဉ်ꩻတောမ်ႏ တသွုန်တွောင်းတရျားညီႏ အနေႏနဝ်ꩻသွူ။
အေင်ဒိယခမ်းထီ ကိုနဝ်ꩻ ဖွဲ့ဗူႏခါꩻတောမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏ ၂၈ ဖြုံႏ၊ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ ၇ ဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းနယ်ႏကားကအဝ်ႏလို့လို့တောမ်ႏ ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ ၂ ဖြုံႏ ကထွာဒါႏ ပူဒုချယ်ရီ တောမ်ႏ ဒေလီစွိုးခွိုꩻခမ်းခြွဉ်းဗူႏဝေင်ꩻတန်ဟံႏနယ်ႏကိုနဝ်ꩻ လွိုက်ဒင်ႏခါꩻဒါႏ လွတ်တောႏအဝ်ႏတဲင် အစိုႏရနဝ်ꩻ ဖွဲ့ဗူႏခါꩻတောမ်ႏ ဝက်မင်စတာ ပုင်ႏစံႏနဝ်ꩻသွူ။ အဝ်ႏကုဲင် ခမ်းခြွဉ်းဗူႏဟံႏနယ်ႏ ၅ ဖြုံႏနဝ်ꩻ ဒင်ႏမျောက်လွေꩻ အိုပ်ချုတ်ရေꩻကယ်ႏဖုံႏတဲင် အဝ်ႏဗဟိုႏ အိုပ်ချုတ်လွေꩻတိုက်ရိုက်ဒျာႏသွူ။ ခရိစ်နေင်ႏ ၁၉၅၆ ဗာႏ စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်ချာခမ်းနယ်ႏဖုံႏ ဥပဒေႏအလꩻ ခမ်းနယ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဖွဲ့ဗူႏအခေႏခံႏလွေꩻတောမ်ႏ ဘာႏသာႏငဝ်းငွါအလောင်းနဝ်ꩻသွူ။
ဂျမ္မူတောမ်ႏ ကသ္မီရ ဆရင်နဂါ
ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ ခမ်းနယ်ႏဖုံႏ စာႏရင်ꩻကိုကီနဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ခမ်းနယ်ႏအစိုႏရသီး အဝ်ႏအိုပ်ချုတ်လွေꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ထွူတကာႏတဝ်း အဝ်ႏဗဟိုႏအစိုႏရ တိုက်ရိုက်ကအိုပ်ချုတ်စွဉ်ႏလွေꩻဒါႏ ဟံႏနယ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလ့ယိုအတွိုင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဟံႏနယ်ႏဝေင်ꩻတန်-
ကပ္ပလီကြွန်တောမ်ႏ နီကိုဗာကြွန် ပို့ဗလဲယား
ဒါဒရာနှင့် နာဂါဟာဗေလီ ဆီလဗတ်ဆ
ဂိုအာ၊ ဒါမန်နှင့် ဒျူ ပါနာဂျီး
ခမ်းနယ်ႏစာႏရင်ꩻကို ကအွဉ်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ ဆစ်ကင်းခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻ ကရီးခါ ထွာဒျာႏ အေင်ဒိယအစိုႏရ အစောင်းသျောက်ခံႏ နယ်ႏတဖြုံႏဒျာႏသွူ။ တွိုႏ ၁၉၇၅ ဗာႏ မတ်လာ ၁ နီꩻကို ခမ်းနယ်ႏကိုကအဝ်ႏဒါႏ ခမ်းသားဆန္ဒအလꩻ တွိုႏဧပီလာ ၂၆ နီꩻနဝ်ꩻ နွို့ပါညီꩻလွေꩻယင်း အေင်ဒိယခမ်းခြွဉ်းဗူႏကို ခမ်းနယ်ႏတဖြုံႏအနေႏနဝ်ꩻသွူ။ ဝေင်ꩻနျူးဒေလီနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အေင်ဒိယခမ်းခြွဉ်းဗူႏခမ်းထီ ဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။ အေင်ဒိယခမ်းထီနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ကုလသမဂ္ဂအစွိုꩻနွို့ ခမ်းတခမ်းဒျာႏသွူ။
လိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ကအဝ်ႏအုံသော့ꩻဒါႏ အေင်ဒိယခမ်းထီတန်နဝ်ꩻ ကိုꩻကွဲႏမုꩻဘာႏသာႏလဲ့ အဝ်ႏစွုမ်ႏငါႏသွူ။ ဖြွမ်းဗူႏပုင်ႏ အခေႏခံႏဥပဒေႏအလꩻ ဘာႏသာႏရေꩻကိုꩻကွဲႏမုꩻနဝ်ꩻ လွစ်လွစ်တခြင်ခြင် အဝ်ႏဖေႏခါꩻဒျာႏ ကိုႏကွဲႏခွင်ꩻလဲ့ ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ကိုꩻကွဲႏဒျာႏ ဟေင်ဒူဘာႏသာႏနဝ်ꩻသွူ။ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၀၁ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအလꩻ အေင်ဒိယခမ်းကို ဘာႏသာႏအလွောက်ꩻ ကိုꩻကွဲႏမုꩻနဝ်ꩻ ဟေင်ဒူ ၈၂၇,၅၇၈,၈၆၈ ဖြာꩻ (၈၀.၅ %)၊ မွတ်ဆလင် ၁၃၈,၁၈၈,၂၄၀ (၁၃.၄ %)၊ ခရစ်ယာန်ႏ ၂၄,၀၈၀,ဝ၁၆ (၂.၃ %)၊ သစ်ခ် ၁၉,၂၁၅,၇၃၀ (၁.၉ %)၊ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ ၇,၉၅၅,၂၀၇ (ဝ.၈ %)၊ စေင်း ၄,၂၂၅,၀၅၃ (ဝ.၄ %)၊ ဘာႏသာႏအယူႏဝါႏဒအလင်ဖုံႏ ၆,၆၃၉,၆၂၆ (ဝ.၆ %) တောမ်ႏ ဘာႏသာႏအယူႏဝါႏဒအဝ်ႏတဝ်း ၇၂၇,၅၈၈ (ဝ.၁ %) ဖြာꩻဖုံႏဒျာႏသွူ။
၂၀၁၁ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအလꩻ အေင်ဒိယခမ်းထီ အွဉ်ႏနယ်ကိုꩻကွဲႏဘာႏသာႏပုင်ႏ
↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 National Symbols | National Portal of India။ India.gov.in။ “The National Anthem of India Jana Gana Mana, composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the National Anthem of India on 24 January 1950.”
↑ "National anthem of India:abrief on 'Jana Gana Mana'"၊ News18၊ 14 August 2012။
↑ Constituent Assembly of India 1950.
↑ Profile | National Portal of India။ India.gov.in။
↑ Constitutional Provisions – Official Language Related Part-17 of the Constitution of India။
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Times News Network
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named NoneNtl
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Press Trust of India
↑ 50th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities in India (July 2012 to June 2013)။ Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India။
↑ Lewis, M. Paul:Ethnologue: Languages of the World (Seventeenth edition) : India။ Ethnologue by SIL International (2014)။
↑ Ethnologue : Languages of the World (Seventeenth edition) : Statistical Summaries။ Ethnologue by SIL International။
↑ Population Enumeration Data (Final Population)။ 2011 Census Data။ Office of the Registrar General & Census Commissioner, India။
↑ A –2Decadal Variation in Population Since 1901။ 2011 Census Data။ Office of the Registrar General & Census Commissioner, India။
↑ 19.0 19.1 19.2 19.3 "World Economic Outlook Database: April 2022"၊ International Monetary Fund၊ April 2022။
↑ Gini Index coefficient။ Central Intelligence Agency။
↑ Gini index (World Bank estimate) – India။ World bank။
↑ Human Development Report 2020။ United Nations Development Programme (15 December 2020)။
↑ List of all left- & right-driving countries around the world (13 May 2020)။
↑ Country Profile: India (PDF)။ Library of Congress – Federal Research Division (December 2004)။ 24 June 2007 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ States Reorganisation Act, 1956။ Constitution of India။ Commonwealth Legal Information Institute။ 16 May 2008 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 31 October 2007 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။; See also: en:Political integration of India.
↑ Census of India : Religious Composition
Cite error: <ref> tags exist foragroup named "မတ်ရောမ်", but no corresponding <references group="မတ်ရောမ်"/> tag was found
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/အေင်ဒိယခမ်းထီ&oldid=5417761"
Last edited on 29 April 2022, at 05:48
This page was last edited on 29 April 2022, at 05:48.